Nyocha vidiyo nke Samsung Galaxy S6 Edge | Androidsis
N'oge Ngosipụta nke Samsung Galaxy S6 Edge anyị nwere ohere nwalee ekwentị nke mbụ nwere ogwe ihu gbagọrọ agbagọ. Ngwaọrụ nwere njirimara na -ebuli ya elu na ngalaba ahụ yana ihe mara mma na nke na -akụda ala.
Samsung Galaxy S6 Edge na -efu euro 150 karịa ụdị nke a, yabụ ọ bara uru ịkwụ ụgwọ karịa ịnwe ọdụ a? Iji zaa ajụjụ a, anyị na -ewetara gị a Nyocha vidiyo Samsung Galaxy S6 Edge ebe anyị na -enyocha ọrụ na njiri mara nke ama ama a.
1 Igwe TouchWiz dị mfe ma dị mfe
2 N'ezie arụ akụkụ akụkụ akụkụ
Igwe TouchWiz dị mfe ma dị mfe
Ọtụtụ ndị ọrụ mere mkpesa banyere nkwụsị nke ngwa ọdịnala nke onye nrụpụta Korea jikọtara na ngwaọrụ ya niile. Site na mbata nke Galaxy S6 Edge, Samsung ahọrọla ekwentị na -eme ka mkpuchi TouchWiz gị dị mfe.
Dị ka ị nwere ike ịchọpụta onye nrụpụta O tinyela naanị ngwa abụọ nke ya, S Health na S Voice, n'agbanyeghị na site na ụlọ ahịa ngwa Samsung anyị nwere ike ibudata ngwa ọ bụla n'aka nnukwu Korea nwere ike ịmasị anyị. Nkọwa nke ọtụtụ n'ime anyị nwere ekele.
N'ezie arụ akụkụ akụkụ akụkụ
Samsung Galaxy S6 Edge abụghị nnwale dị ka Samsung Galaxy Note Edge. A na -atụ anya na Eprel 10 na -esote ọ ga -erute n'ọtụtụ ahịa yana, n'adịghị ka onye ọzọ so na Edge, nnweta ya ga -abụ oke. Ma, Ọ bara uru ịkwụ ụgwọ karịa ịnwe akụkụ ndị a gbagọrọ agbagọ? n'uche nke m, enweghị obi abụọ.
Iji bido, imewe ahụ dị iche, ọ naghị eso ahịrị nke ọtụtụ ngwaọrụ nwere akara na a na -enwe ekele maka mmetụ nke ịbụ eziokwu. Kedu ihe ọzọ akụkụ ya gbara agba na -arụ ọrụ n'ezie n'ihi ya, ọ bara uru iji ohere nke ọ na -enye.
Dị ka ị hụla na nyocha vidiyo nke Samsung Galaxy S6 Edge, n'aka ekpe gaa n'aka nri agaghị enwe nsogbu iji ohere nke ngwaọrụ a nyere ebe ọ bụ na ị nwere ike họrọ akụkụ ịchọrọ iji.
Nhọrọ nke inwe kọntaktị ruru ise, nke anyị nwere ike nweta site na iji mmegharị mkpịsị aka anyị dị mfe bara ezigbo uru. Anyị nwekwara ike hazie ka ọ bụrụ mgbe ị na -enweta oku ma ọ bụ ọkwa ihu nke a agba dị iche dabere onye kpọrọ gị.
Dị ka a tụrụ anya ya, akụkụ ahọpụtara ga -enwukwa mgbe anyị nwetara ọkwa na ozi, bara ezigbo uru kemgbe ị nwere ike ihu Samsung Galaxy S6 Edge ihu na ị ga -aga n'ihu na -ahụ ozi ị na -enweta.
Na nkenke, anyị dị n'ihu otu n'ime ọdụ kacha atọ ụtọ n'afọ. Samsung arụwo ọrụ ya nke ọma ma bie ndụ na -atụ anya ya. Anyị ga -ahụ ma ọ bụrụ na ekele Samsung Galaxy S6 Edge ọ jisiri ike nwetaghachi nkewa mkpanaka ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy S6 Edge, anyị nyochaa na vidiyo mbụ ama ama na ihuenyo ihu abụọ
M na -ekwu na ọ ga -adị na enyo nwere akụkụ akụkụ ya abụọ. Maka lelee ihe m na -agwa, mana na foto niile, naanị otu ihuenyo ka m na -ahụ, ọ bụghị abụọ.